merolagani - प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
Oct 15, 2020 05:57 PM Merolagani
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको (PLIL) असोज २९ गते बिहीबार तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा काठमाडौं म्यारियट होटलमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
२०६४ सालमा दर्ता भएको २०७४/०८/२८ देखि वीमा व्यवसाय कारोबार संचालन गर्दै आएको यस कम्पनीका संचालक समितिमा अध्यक्ष डा. आत्माराम घिमिरे लगायत संचालक सदस्यहरुमा सुभाष अमात्य, रामेश्वर सापकोटा, नरेश बहादुर मल्ल तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट मनिराम पोखरेल रहेका छन् ।
साधारण सभाले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु समेत पारित गरेको छ ।